Samsung dia manomboka manamboatra chip ho an'ny fitrandrahana vola crypto | Vaovao momba ny gadget
Ny tsenan'ny cryptocurrency dia mitohy malaza be ankehitriny. Raha ny marina dia mihamaro ny orinasa manatevin-daharana an'io fironana io. Herinandro vitsivitsy lasa izay dia i Kodak no nandefa ny vokatrao manokana mifandraika amin'ity tsena ity. Anjarany Samsung izao. Satria ny multinational koreanina koa dia manao ny fitsambikinana amin'ny tsenan'ny cryptocurrency.
Ny orinasa dia efa nanomboka tamin'ny famokarana chip ASIC amin'ny fitrandrahana Bitcoin sy ny crypto hafa. Saingy, lavitra lavitra ny drafitr'i Samsung. Ka toa nahita haran-dranomasina tsara teo amin'ny tsenan'ny cryptocurrency ilay orinasa ary dia hanomboka ny famokarana fitaovana manokana.
Efa miomana ny orinasa manomboka ny famokarana betsaka an'ireny chips ASIC ireny. Ireo dia chips izay miavaka amin'ny fahombiazany manoloana ny fitrandrahana cryptocurrency. Ankoatr'izay dia mankafy a malaza be eo amin'ny tsena aziatika. Noho izany ny orinasa dia afaka mahazo tombony lehibe amin'ity fanapahan-kevitra ity.
Toa, Ny chip ASIC izay hamokatra Samsung dia ampiasain'ny mpanamboatra sinoa iray izay manokana amin'ny famoronana fitaovana fitrandrahana. Saingy, amin'izao fotoana izao dia tsy fantatra ny anaran'ity orinasa ity. Na dia, efa voamarika fa ny Ny fifanarahana teo amin'izy roa dia nakatona tamin'ny faran'ny taona lasa.
Tamin'ny voalohany, ireo chips ireo dia hifantoka amin'ny tsenan'i Sina aloha. Na dia misy koa ny drafitra hamidy azy ireo any aoriana Korea Atsimo sy Japon. Saingy hitranga amin'ny dingana fanitarana faharoa izany, izay tsy misy daty amin'izao fotoana izao.
Na dia toa izany aza Ny asan'i Samsung dia tsy ferana amin'ny fanaovana an'ireny chips ireny. Satria ny drafitry ny orinasa dia mandalo ny fanamboarana GPU manokana hanamorana ny fitrandrahana cryptocurrency. Ka ho an'ireo izay mitady milina matanjaka sy mahasoa.
Fanapahan-kevitra mahaliana ataon'ny Samsung io. Hatramin'ny nidiran'ny orinasa amin'ny tsena iray izay mitombo ny fahalianany mandritra ireo volana ireo. Ka tsy maintsy jerentsika izay efa nomanin'izy ireo. Ahoana ny hevitrao momba izany?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » solosaina » Hardware » Samsung dia manomboka manamboatra fitaovana ho an'ny fitrandrahana cryptocurrency